Saldhigyada Wax-soo-saarka Cusub waxaa lagu xiray magaalada Yangzhou, ee gobolka Jiangsu
Saldhigyada Waxsoosaarka Cusub waxaa laga dhisay Magaalada Yangzhou, Gobolka Jiangsu, Shiinaha, waxay gaaraysaa 25000m2. Khadka wax soo saarka cusubi ma aha oo kaliya inuu soo saaro guddi qoraxda ku shaqeeya oo leh 210mm, laakiin sidoo kale waxaa ku jira wax soo saar kale oo ku shaqeeya tamarta cadceedda sida 166mm taxane (M6) iyo taxane 182mm (M10). Sanadka cusub waxaan duufaan doonaa ...
Nidaamka Qorraxda Iyo Tababbarka Rakibaadda EPC
Nidaamka Cadceedda iyo Tababbarka Rakibaadda EPC Si aad ugu adeegto macaamiisheenna, Apex waxay u diyaarisaa tababarka teknolojiyadda iyo tababarka rakibaadda EPC ee Kooxda Iibinta Apex. tababarka waxa ku jiray aqoonta xirfadeed ee sol ...
Shirka Teknolojiyada Nidaamka Qoraxda ee 182mm Solar Module
Maxay Tahay Sababta Gudiga Qoraxdu Ukujiraan Unugyada Cadceedda Ee Kala-Goynta Loo Yaqaano Popular Apex Solar khad soosaar cusub oo wata # 182mm #modules ayaa la bilaabi doonaa bisha Maarso ee sanadka soo socda. Maanta waxaan kaqeyb qaadanay modullada 182mm iyo nidaamka farsamada shirka hel ...
Bixinta Apex Solar ilaa 1.2MW
Apex Solar Supply Ilaa 1.2MW Apex Solar oo la siinayo 1.2MW oo ka mid ah koronto qorraxda si loogu rakibo qalabka qoraxda saqafka. 380w mono baararka qoraxda Annagu kaliya ma bixinno tayada wanaagsan ee baallayaasha qoraxda, laakiin sidoo kale waxaan si deg deg ah ku gaarsiinaynaa 3-7days gudahood ....
Maxay Tahay Sababta Gudiga Qoraxdu Uku Leedahay Unugyada Cadceedda Ee Half-Gooyaa Ah?
Maxay Tahay Sababta Gudiga Cadceedda ee Unugyada Cadceedda ee Half-Cut loo Yaqaano Si Aad u Caansan？ Gudiga qoraxda badan ee basaska ayaa qaata teknolojiyadda isku xidhka basaska badan. Tikniyoolajiyada iskuxiraha basaska badan waxay adeegsadaan naqshadeynta alxanka unugyada unugyada basaska badan si loo wanaajiyo waxtarka c. ..